अनुराग कश्यप नेपाली फिल्म फेष्टिभलमा सहभागी भएको कति पारिश्रमिक चार्ज गर्छन् ? - Sawal Nepal
काठमाडौं सवालनेपाल २०७८ बैशाख २१, १८:२६
बलिउड निर्देशक तथा निर्माता अनुराग कश्यप यही वैशाख २३ गतेबाट सुरु हुन लागेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल (निफ)मा सहभागी हुँदैछन् । भलै यो पटक निफ भर्चुअल माध्यमबाट हुँदै छ । उनले निफमा आफ्नो चलचित्र करिअरको अनुभव सुनाउँदै छन् ।
नेपाल आएको भए उनले नेपाली फिल्म मेकरहरुका लागि एउटा मास्टर क्लास लिने थिए । फिजिकल रुपमा उपस्थित भएर दिने जस्तो भर्जुअल क्लास प्रभावकारी हुन्छ वा हुँदैन तर आयोजकले अनलाइनमार्फत झन धेरैले उनलाई सुन्न पाउने दाबी गरेको छ ।
उनी नेपाली फिल्म फेष्टिभलमा सहभागी भएको कति पारिश्रमिक चार्ज गर्छन् ?
निफ अध्यक्ष केपी पाठक भन्छन्– हामी कहाँ पारिश्रमिक दिन सक्छौं, आउने जाने र नेपाल बस्दाको खर्च मात्रै बेहोर्ने हो । “हामी उनीहरुलाई पेमेन्ट गर्न सक्दैनौं । अनुरागलाई हामीले नेपाल आउँदा र फर्किंदा इकोनोमिक क्लासको टिकट काट्ने र नेपाल बस्दा पाँचतारे होटलको स्विटरुममा बसाउने हो । उनीसँगै आउने तीनजनाको खर्च पनि हामीले तिर्नुपथ्र्यो,” केपी भन्छन्, “अनुराग नेपाल छँदा यहाँ उसले चाहेको ठाउँमा हामीले घुमाइदिने हो । चन्द्रागिरि, पशुपति, लुम्बिनीजस्ता ठाउँ घुमाइदिने योजना थियो ।”
बलिउडकर्मीहरु उनीहरुको चलचित्रको बजार नेपाल पनि भएकाले पारिश्रमिक दिन सक्दैनौं भन्दा बजार प्रवद्र्धनका रुपले आउने गरेको केपी बताउँछन् । अन्य देशका ठूला फिल्म फेष्टिभलमा जाँदा भने उनीहरु मोटो रकम चार्ज गर्छन् ।
विवाहसँग जोडिएका ८ गोप्य कुरा